Maxaad Ka taqaan Diyaaradaha aan cidi wadin e drones, ka ah | Biyoguurenews.com
Home Wararka Maxaad Ka taqaan Diyaaradaha aan cidi wadin e drones, ka ah
Maxaad Ka taqaan Diyaaradaha aan cidi wadin e drones, ka ah
Weerarkii lagu qaaday keydka shidaalka Sacuudiga wuxuu sababay shaki ah in diyaarado drone ah oo kuwa dagaalka ah loo adeegsaday.
Maamullada Mareykanka iyo Sacuudiga waxay sheegeen in tani ay kiis fiican noqon karto.
Duullaanka loo adeegsado diyaaradahan ayaa si weyn sare ugu sii kacayay sannadihii la soo dhaafay, mana jirto meel ka badan Bariga Dhexe oo laga isticmaalo.
Haddaba, dalkee haysta, midkeese dagaal u adeegsada?
Dagaalkii ugu horreeyay ee diyaaradaha Drone-ka loo adeegsado wuxuu dhacay sannadkii 2001-dii, habeenkii ugu horeysay ee uu billowday dagaalka uu Mareykanku ku qaaday Afghanistan.
Diyaaradaha uusan duuliyaha saarneyn ee hubeysan waxay ahaayeen teknolojiyad cusub oo dalalka horumaray ay haysteen, waxaana hoggaaminayay Mareykanka iyo Israa’iil.
Si deg deg ah waxaa soosaaridda diyaaradaha noocan ah ugu soo biiray Shiinaha oo aad u jecel inuu hubkiisa ku iibiyo daafaha caalamka.
Shiinaha wuxuu xoojiyay inuu hubkan ku baahiyo Bariga Dhexe, isagoo in ka badan kala bar dalalka gobolkaas ka iibiyay.
Kuwa shacabka ay adeegsadaan ee drone-ka ah, ayaa sidoo kale la casriyeeyay, waxaana teknolojiyad ahaan loo baddalay kuwa loo adeegsado dagaalka.
Inkastoo teknolojiyadda ay suuragal tahay in aysan xadka ka bixin, haddana diyaaradaha noocan ah oo casri ah waxaa soo saari kara dalkasta oo leh warshado horumarsan – xitaa Iiraan taas way ku fiicnaan kartaa marka dhan laga eego.
Dalka Iiraan wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray inuu drones loo maleynayo in ay casri yihiin siiyo ururro aan dowli ahayn oo gobolka ka jira, sida Xuutiyiinta mucaaradka ah ee Yaman.
Bariga Dhexe waa meel ka mid ah xuddunta dagaalka lagula jiro argagixisada. Waxaa hardankaas qeyb ka ah dalalka haysta qalabka dagaal ee casriga ah, sida Mareykanka, Britain iyo Ruushka.
Waxaa kale oo jira dalal isku haya gobolka oo kala marti geliya waddamadaas. Qadka aan saxneyn ee la sheego waa midka Israa’iil iyo dalalka Gacanka Carabta oo dhan ah iyo Iiraan iyo xulafadeeda oo dhanka kale ah, sida dagaalka dadban ee ay ku taageereyso Xisbullah iyo Xuutiyiinta.
Mareykanka wuxuu Bariga Dhexe u adeegsadaa diyaarado drone ah oo si weyn u hubeysan, taas oo qeyb ka ah ol’olihiisa ka dhanka ah Al-Qaacida iyo ururka la magac baxay dowladda Islaamka (IS).
Hubka saaran drone-ka xawaaraha dheer ee aan la arkin waxaa lagu adeegsaday dagaallada Suuriya, Ciraaq, Liibiya iyo Yaman.
Kuwa kale ee loo yaqaano MQ-9 Reaper way waa weyn yihiin, wayna culus yihiin, sida diyaaradaha kale ee caadiga ah. Waxay qaadaan hub aad u culus oo burbur baaxad wayn geysan kara.
Aqoonta dheer ee diyaaradaha duuliyaha uusan saarneyn ee casriga ah, Israa’iil waa mid ka mid ah dalalka kuwa ugu badan dhoofiya, sida laga soo xigtay warbixin 2018-kii la daabacay – Qiyaastii, waa 60 boqolkiiba suuqa caalamka.
Macaamiisha waxaa ka mid ah Ruushka oo Israa’iil ay ka iibisay drone-ka ilaalada loo adeegsado. Waxayna xitaa soo riday mid ka mid ah ka dib markii ay ka soo gudubtay Qadka Suuriya iyo Israa’iil.
Israa’iil waxay adeegsataa noocyo kala duwan oo isugu jira kuwa basaasidda, dabagalka iyo weerarrada.
Diyaaradaha drone-ka ee hubeysan waxaa ka mid ah Heron TP, Hermes 450 iyo Hermes 900.
Balse Israa’iil weligeed dal kale kama aysan iibin kuwa noocan ah.
Inkastoo cunna qabateyn hub iyo kuwa kaleba ay saaran yihiin, Iraan waxay sameysatay diyaarado uusan duuliyaha saarneyn oo casri ah.
Waxaa loogu magacdaray Shahed-129, markii ugu horeysay ee la soo bandhigayna waxay ahayd 2012-kii, xilligaas oo lagu weeraray saldhigyo ay lahaayeen ururka la baxay Dowladda Islaamka ee Suuriya iyo Ciraaq. Sannadkii 2018-kiina waxay sameysatay kuwo loo bixiyay Mohajer 6.
Dalka Isutagga Imaaraatka Carabta wuxuu haystaa diyaarado drone ah oo Shiinaha uu u sameeyay kuwaas oo loo adeegsaday weerarro lagu qaaday Yaman iyo Liibya.
Imaaraatka wuxuu taageerayaa garabka uu hoggaaminayo Janaraal Xaftar. Turkiga oo taageera dowladda isbeheysiga ah ayaa isagana dhankiisa ku caawiyay diyaarado drone ah oo duullaano loo adeegsaday.
Maadaama aysan awoodin in Turkiga uu Mareykanka ka iibsado diyaaradana, wuxuu sameystay kuwo u gaar ah oo uu ku weeraro kurdiyiinta gudaha Turkiga iyo kuwa Suuriya.
Ciraaq, Urdun, Sacuudiga, Masar iyo Aljeeriya waxay diyaaradahan duuliye la’aanta ah ee dagaalka ka iibsadeen Shiinaha.
Xuutiyiinta waxay ka mid yihiin kuwa la qabsaday adeegsiga diyaaradahan ee ka midka ah ururada aan dowliga ahayn. Waxay ku howlgalaan hannaano kala duwan oo si weyn ugu tiirsan teknolojiyadda Iraan, sida ay sheegeen Khubarada Qaramada Midoobeey.
Waa kuwo si aan caadi ahayn u ah “kamikaze”, oo ah diyaarado si ula kac ah loogu dhufto uguna qarxa bartilmaameedka.
Warbixin kale oo Qaramada Midoobey ay soo saartay waxaa lagu sheegay in Xuutiyiinta ay adeegsadaan diyaarado drone hore ah oo loo garanayo Samad-2/3, kuwaas oo la aaminsan yahay inay sidaan madaxyo aan qarax weyn sameyn karin.
Sidoo kale xagjiriinta Shiicada ah ee Lubnaan, Xisbullah, ayaa adeegsaday tiro yar oo drone ah oo loo maleynayo inay Iraan siisay.
Ururrada ugu badan ee aan dowliga ahayn ee isticmaalay Diyaaradaha duuliyaha uusan saarneyn waxay ka dagaallamaan Suuriya. Mucaaradka qunyar socodka ah ayaa horey xitaa ugu weeraray saldhigyada Ruushka ee dalkaas.
Maxay tahay saameynta xun ee gobolka ay ku leeyihiin?
Waxaa cad in diyaaradaha drone-ka ee hubeysan ee casriga ah si weyn oo baahsan loo adeegsado.
Marka lakala sooco, Mareykankanku xulafadiisa kama iibiyo kuwa casriga ah, meeshana kama saarin faafidda diyaaradahan, sababtoo ah, Shiinaha wuxuu si faan uu ku jiro suuqa uga buuxiyay kuwiisa ugu casrisan.
Isticmaalka diyaaradahan ee goobaha dagaalka waxay fureen hab cusub oo la isu wajaho, wuxuuna shucaac ku furay qadka u dhexeeya nabad iyo colaad.
Waxay suurageliyeen qaadidda weerar aysan saameyn ka soo gaareyn dalka qaaday, waa haddii ciidanka sirdoonka ah ay si sax ah u adeegsadaan.
Diyaaradahan waxay u muuqdaan in lagu doodo in loo adeegsanayo dagaalka Argagixisada, balse waxaa jiro dhinac kale oo ah hardanka gobolka ee u dhexeeya dalalka teknolojiyad ahaan horumaray iyo kuwa aan weli casrigaas gaarin, balse galaangalka leh.
Previous articleXildhibaan Dheeg Oo Ka Shifay Dhibaatadda Ay Bulshadda Ku Hayso Diyaaradda FLY Dubai.
Next articleDawladda Ingiriiska ayaa weli ku dhegan mawqifkeeda ah in dalalka gobalka ee Afrika ay horseed ka noqdaan aqoonsiga Somaliland